Zvizere Kuzviongorora kwePfuma Yako Management Bhizinesi
Manage ese ako ekupinda -kiyi keysafes, smart kukiya, kana KeyNest - kuburikidza Zeevou.
Denda reCoronavirus rakachinja nyika nenzira isingafungidzirwe nemunhu. Maindasitiri akasiyana, kunyanya Airbnb uye mamwe makambani anopa mabasa ekugamuchira vaeni, akaona kuderera kukuru kwehupfumi. Asi yave nguva yekuvandudza uye kuchinjisa nekuti kuchine basa rakawanda rinofanira kuitwa.
Tichifunga nezve COVID-19 denda, mu-munhu kutarisa-mukati kunogona kuwedzera njodzi yekutapurirana kwecoronavirus. Wese munhu asina basa muindasitiri yekugamuchira vaeni ari kubata neshanduko nyowani nematambudziko munzvimbo ino nekuda kwedenda. Vanoshandira vashandi vepamba, mamaneja ekurendesa zororo, uye kunyange varidzi vehotera vari kuyedza kuuya nedzimwe nzira dzekuvandudza masevhisi avo. Kushandisa kuzviongorora kunoderedza kusangana pakati pevashandi nevashanyi zvimwe zviito zvakakosha zvekutora.
Kujairira ino nyika nyowani yatiri kugara tese zvinogona kunge zvisiri nyore, kunyanya kune vanhu vari muindasitiri yekugamuchira vaeni, asi Zeevou ari kushanda nesimba kuti awane nzira dzekuvandudza dzekuti isu tese tirambe tichiita bhizinesi rakasarudzika kure.
Iko kune zvirokwazvo zvimwe zvakanaka zvekugamuchira vaenzi kune yako pfuma mune-munhu iyo yekuzviongorora-ins kushaya. Izvo zvakanaka kugamuchira vanhu vakahaya chivakwa kubva kwauri, kuburikidza neMega & Kwazisai kana murume ane concierge. Izvo zvinokubatsira iwe kuti uzive vashanyi vako uye wovaita kuti vanzwe vakasununguka kuvepo. Zvakare, kukwazisana nemuenzi wako maoko uye kuita kuti vanzwe kugamuchirwa mutsa 101. Zvisinei, tichifunga mamiriro edu matsva, tinofanirwa kuenda kumberi. Kucherekedza tsika dzekupararira munharaunda kwakaoma muindasitiri yedu, dzimwe nzira dzakasarudzika dzinodaidzirwa. Indasitiri yekugamuchira vaenzi inogara yakatarisira masisitimu anotendera kure kure, kuzviongorora wega uchiona kuti nzira dzese dzinogona kunyatso chengetwa; uye zvese zvivakwa zvinochengetedzwa zvakachengeteka.
Zeevou Inogona Kusangana Nayo Check-ins Inobatsira Sei?
Zeevou ari kumberi kwazvo kune indasitiri yekugamuchira vaeni. Isu tinoona kuti denda reCovid-19 rakatiunzira sei hupenyu hutsva, uye isu takagadzirisa maficha edu kuratidza izvo "zvitsva zvakajairika". Pano paZeevou, isu tine hanya nekuchengeteka kwevaenzi vako pamwe neyako. Tinoda kuti iwe ugare uine hutano uye uchengetedze zvinhu zvako zvakakwana. Tine tarisiro yekuve yakanakisa Property Management System kunze uko, isu tapedza makore tichishanda kuti tiwane yakazara otomatiki kutenderera mashandiro ekuita. Mukupindura izvi, isu takagadzira yakakwana yakazara otomatiki kubhuka kugadzirisa system. Iyi otomatiki yekubata isingabvumirwe maitiro anotendera iwe kuti utore nezvevaenzi ruzivo, kutora mubhadharo, kurongedza kuchengetedzeka mari, uye kuongorora vaenzi vako kubva kumba kwako kana kuhofisi
Mumamiriro ekunze azvino, izvi zvave kutora kukwezva kwechido kubva kune vanoshanda veese saizi, sezvo ivo vachitsvaga kuita maitiro nemaitiro anovabvumidza kuti varambe vachimhanyisa mabhizinesi avo vachiita kuti vaenzi vanzwe vakasununguka uye vachideredza njodzi chero ipi zvayo kuvashandi.
Iyi mhinduro yedhijitari inoita kuti ugare pamba, chengeta chinhambwe chakachengeteka, uye uteedzere maprotocol apo isu tichikubatsira iwe kubata yako imba zvisinei kuti ndeipi kure yekutarisa kambani yakadai KeyNest kiya mabhokisi, smart kukiya kana Keysafe, urikushandisa. Iko hakuna kunetsekana kwekutora chikumbiro kana kuenda nenzira yakaoma. Isu takagadzira yedu isingabate Check-ins kuve humbowo hwehumbowo.
Kushandisa Zeevou's Kusingabate Check-ins kuri nyore uye kururamisa uye kunopa yakachengeteka uye inofadza chiitiko kune iwe nevako vashanyi. Iyi ficha inokutendera iwe kuti uwane mukana wepfupi wekutarisa kwega kwega uye nhanho yedanho rega kuburikidza neyedu mashanu-Matanho Ekubhuka Simbiso Maitiro. Zeevou's isina kutaurirana yekutarisa-ins inokubatsira iwe seMugadziri nyore kuteedzera vanosvika uye nekuona kuti iyo chaiyo otomatiki kutaurirana inobuda kuenda kumuenzi kunzvimbo chaipo.
Zeevou inoratidzira cheki-in manejimendi kunyange yedu mashanu-nhanho kubhuka yekusimbisa maitiro Iyi ficha inovimbisa nhanho yega yega yekubhuka maitiro ari mukutonga kwako. Kana iyo 5-nhanho Yekusimbisa Yekusimbisa Maitiro yapera, yekuzviongorora-mukati mirairo inotumirwa kunze. Ita shuwa kuti vashanyi vako vanogashira ruzivo rwese rwavanoda, pavanenge vachirida, rwechiitiko chakanakisa chevaenzi.
Kunze kwekuti Zeevou akagadzira chinhu ichi kuti ugare wakachengeteka uye uine hutano panguva denda reCovid-19, unogona kuchengetedza nguva nesimba nekushandisa zvisina kuonana nekutarisa. Rega Zeevou ikubatsire kubata yako imba -bata nesu izvozvi for a free demo uye uzive wega mabhenefiti eedu asingabate Check-ins kune ako zvivakwa.